WhatsApp, raha tsy ekenay ny fepetra fampiasana, tsy afaka manohy mampiasa ny fampiharana ianao | Vaovao momba ny gadget
Io tolakandro io ihany dia nivoaka ny vaovao izay mivoaka indray ny fizarana faha-7 amin'ireo fepetra vaovao hampiasana ny fampiharana fandefasan-kafatra malaza indrindra amin'ireo mpampiasa WhatsApp. Ity fizarana ity dia manondro fa raha tsy ekentsika ny fepetra fampiasan'ny fampiharana dia azontsika atao ny mijanona tsy mampiasa azy io, indrindra fa milaza izao manaraka izao: "Raha tsy miombon-kevitra amin'ny Terms sy ny fanovana nataony izahay dia tokony hijanona tsy hampiasa ny Serivisinay." Ka ho an'ireo rehetra izay nanilika ny fankatoavana ny fepetra vaovao amin'ny fampiasana ny fampiharana iray volana lasa izay, dia tsy manan-tsafidy afa-tsy ny hanaiky izy ireo hahafahany mandalo ny efijery izay mampiseho rehefa misokatra izy io.
Iray volana lasa izay ny tabataba vokatry ny fepetra vaovao amin'ny fampiasana ilay application izay mamela ny WhatsApp hizara ny nomeraon-telefaonantsika amin'ny Facebook. Toy ny fitsipika ankapobeny, tsy misy olona mazàna mamaky ny fampiasa amin'ny fampiharana fa raha izany dia tsy mba toy izany ary niteraka adihevitra lehibe. Na dia afaka mametra ny fampiasan'izy ireo aza ny mpampiasa amin'ny sehatry ny fampiharana ka tsy manandanja ny dokam-barotra hitantsika amin'ny tambajotra sosialy, ny vaovao dia efa hita ny fomba fizarana ny angon-drakitra raha toa ka na mihoatra ny 1.000 tapitrisa mpampiasa iza no mampiasa ny fangatahana isam-bolana ...
Ankehitriny ny fizotrany dia lasa zavatra tsy azo hialana ary toy ny fampiharana hafa amin'ireo maro ampiasaintsika amin'ny finday, raha tsy ekentsika ny fepetra fampiasana dia afaka manao veloma ny fampiasana ny fampiharana isika. Hatramin'izao dia mbola manohy mahita ny WhatsApp ho fampiharana fampiasa indrindra amin'ny fitaovana sy olona maro kokoa izahay, saingy mety hiova izany ho an'ny rindranasa hafa izay ao amin'ny magazay fangatahana na an'ny an'ny Google an'ny iOS, iOS, sns.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » WhatsApp, raha tsy ekenay ny fepetra fampiasana, tsy afaka manohy mampiasa ilay rindranasa ianao
Raha mbola mijery ny fepetra fampiasana whatsapp aho dia tsy hitako ny fehintsoratra voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity. Azonao lazaina amiko ve izay fanambarana lazain'ny lahatsoratra 7?
Toa marina amiko izany. Na manaiky ianao amin'izay ataon'ny tompon'andraikitra amin'ny whasap na tsy mampiasa azy.
Tsy fantatro izay maharatsy azy raha toa izany. Ary tsy izany no antony hampijanonanao ny fampiasana whasap.
Raha nandinika izay voalazan'ny fifanarahana rehetra nataonao sonia ianao ... azo antoka fa tsy namela an'ity vaovao ity tamin'ny Internet ianao
Fishing dia hoy izy:
Novaliako i José. Raha tianao ny mitaingina baolina amin'ny arabe dia mandeha ianao. Saingy misy olona maro izay mijery ny fiainany manokana ary manaja izany.
Valiny amin'ny jono
Inona no mahasamihafa azy? dia hoy izy:
Eny, tsy manontany ahy izy. Ny tsy fananako ny nomeraoko amin'ny facebook.?
Mamaly ny zavatra hafa manome
Nisy zavatra nofafanao tsy nety ve? iPhone Data Recovery no vahaolana